🥇 Barnaamijka xisaabinta caafimaadka
Qiimeynta: 4.9. Tirada ururada: 193
Fiidiyowga barnaamijka xisaabinta caafimaadka
Dalbo barnaamij xisaabaad caafimaad
Iyadoo la horumarinayo teknoolojiyada cusub ee kombiyuutarka, inbadan iyo in ka badan, daawadu waxay u baahan tahay barnaamij xisaabeed caafimaad oo isku dari doona dhammaan baahiyaha xisaabaadka ee xarumaha caafimaadka si wadajir ah hal madal. Barnaamijka xisaabinta diiwaanka caafimaadka ee noocan oo kale ah wuxuu gacan ka geysan karaa baabi'inta dhibaatooyinka ka jira xarumaha daryeelka caafimaadka iyo abuurista shaqo tayo leh dhammaan shaqaalaha. Nasiib darrose, waxaa jira barnaamijyo xisaabeed caafimaad oo aad u yar oo ku saabsan suuqa tiknoolajiyada casriga ah, taas oo ka dhigaysa barnaamijyada noocan oo kale ah ee xisaabinta caafimaad inay naadir yihiin, maadaama ay takhasus sare leeyihiin. Shirkadeena waxay jeclaan laheyd inay ku siiso barnaamij noocan ah xisaabinta caafimaadka, maadaama aan ku takhasusay barnaamijyada xisaabaadka caafimaadka oo aan hirgelin karno fikrad kasta oo caafimaad. Barnaamijkeena xisaabinta caafimaad waxaa loo yaqaan USU-Soft program. Waa barnaamijka xisaabinta caafimaadka ee isku daraya dhammaan shaqooyinka jira ee xarun caafimaad waxayna kuu oggolaaneysaa inaad ku sameyso xisaabinta heer cusub! Waxqabadka barnaamijka xisaabaadka caafimaadka ee USU-Soft waa mid aad u ballaaran oo, sidaa darteed, ku habboon shirkad kasta, ha noqoto isbitaal, rug caafimaad, qolka duugista ama xafiiska dhakhtarka indhaha. Barnaamijka USU-Soft ee xisaabaadka caafimaadka, waad ku ilaalin kartaa keydka macluumaadka bukaanka, taas oo iyaduna aad ugu habboon rugta caafimaadka ama isbitaalka; isticmaale kasta wuxuu ku galayaa barnaamijka xisaabinta si fudud oo dhaqso ah. Intaa waxaa sii dheer, waad daawan kartaa taariikhda caafimaadka, horumarka daaweynta, talooyinka dhakhaatiirta, iwm.
Waxa kale oo aad ku dhejin kartaa raajada kaarka bukaanka iyo natiijooyinka falanqaynta, taas oo, iyaduna, hubinaysa in la habeeyo waqtiga shaqada iyo keydinta boos bilaash ah oo ku yaal desktop-ka. Barnaamijka xisaabaadka ee USU-Soft, waxaad si faahfaahsan ugu sharxi kartaa shaqada bukaan socodka, shaqaaluhu la falgalay isaga ama ayada, iwm. Intaas waxaa sii dheer, waxaad diyaarin kartaa isbeddelo ku yimaada shaqaalaha oo aad u magacaabi kartaa bukaanka waqti cayiman. Sidoo kale, waad xisaabin kartaa qiimaha daawooyinka ee barnaamijka xisaabinta, sidoo kale waxaad ku dari kartaa qiimahooda qiimaha adeegga, iwm. Barnaamijka xisaabaadka ee USU-Soft wuxuu leeyahay awood uu kula falgalo bakhaarada waxaadna ku dari kartaa qadar aan xad lahayn oo ah alaabada, daawooyinka, alaabada la isticmaalo, qalabka caafimaadka, intaas oo dhanna waxay ku xiran tahay tira koob! USU-Soft waa barnaamij xisaabeed gaar ah oo loogu talagalay xarumaha caafimaadka iyo isbitaalada; waxay qalabaynaysaa geedi socodka shaqada, kordhinta waxtarka shaqaalaha iyo ka dhigista shaqada maalinlaha ah mid ku habboon!
Sahaminta macaamilku waa lama huraan haddii aad rabto inaad ka dhigto adeegyadaada mid ka sii wanaagsan sidii hore, ugu horreyntii, waxaad u baahan tahay inaad ogaato waxa bukaan socodkaagu ka qabaan adiga. U adeegso dhibcaha qanacsanaanta macaamilka si aad u dhiirrigeliso shaqaalahaaga. Tani waa dhaqan aad u wanaagsan. Laakiin halkaan waxaa ku yaal dabin: shaqaaluhu waxay tixgelin karaan tilmaamahan inuu ka eexanayo iyaga haddii qancinta macmiilka ay saameyn ku yeelatay duruufo ka baxsan awooddooda (tusaale ahaan, qaboojiyaha ayaa burburay, wuxuu ahaa mid kulul oo qolka ku jira macmiilkuna kuma qanacsana) Xaaladdan oo kale nidaamka dhiirrigelintu waxay leedahay saameyn ka soo horjeedda. Si taas looga fogaado, horay u sii go'aam taxadarka cad ee ficillada shaqaalaha haddii ay dhacdo xaalado aan caadi ahayn (tusaale ahaan wax jabay) iyo isugeynta guud ee shaqada haddii ay dhacdo xaalado aan caadi ahayn (tusaale ahaan bukaanku wuxuu u baahan yahay inuu wada hadal dheer ku dhex maro Skype inta adeegga la bixinayo). Tilmaamaha noocan ahi waxay ka caawinayaan shaqaalahaaga inay uga tagaan macaamilka qanacsanaanta xitaa haddii ay jiraan dhibaatooyin lama filaan ah. Haa, waxaan ku noolnahay waqti inta badan farqiga u dhexeeya dalabyada shirkadaha kala duwan ee uu macaamilku arki karo ay ku kala duwan yihiin tayada adeegga. Kala duwanaanshaha dhankaaga ayaa hubaal ah inuu abuurayo rabitaanka macmiilka inuu kuu yimaado.
Maxay bukaanku ugu soo noqonaynin ururkaaga caafimaadka? Waqtiyada dhibaatada ma lihid xulasho aan ka ahayn inaad 'lashaqeyso' bukaanka 100% oo aad la kulanto dhammaan waxa uu ka filayo ama filanayo, maxaa yeelay, haddii kale, bukaanku wuxuu si fudud kuu heli karaa beddelaad adiga ah. Mid ka mid ah sababaha aan u soo muuqan macmiilka ayaa ah marka macmiilku si fudud u ilaaway ama u helay bedel. Si looga fogaado inay taasi dhacdo, waxaa lagama maarmaan ah in la yareeyo suurtagalnimada macmiilka inuu ku iloobo adiga. Si tan loo sameeyo, marka lacag la siinayo macmiilka, maamulku waa inuu weydiiyaa macmiilka haddii isaga ama iyadu la xasuusin karo inay ku soo celiyaan adeegga waqti cayiman ka dib (tusaale ahaan, nus sano ama laba bilood).
Markaad sameysid liistada macaamiisha noocaas ah, waxaad yareynaysaa khasaaraha, waxaad xusuusineysaa macaamiisha ballamaha iyo sidaas darteed waxaad gacan ka geysaneysaa tilmaamayaasha haynta wanaagsan Waxqabadka barnaamijka xisaabinta USU-Soft wuxuu kuu ogolaanayaa inaad macaamiisha noocaas ah ku darto liiska sugitaanka, si marka jadwalka bisha loo sameeyo. Macaamilka waxaa la gelinayaa liiska sugitaanka waxaana jiri doona ogeysiis ah baahida loo qabo in la xusuusiyo macmiilka inuu isqorto. Macaamiisha ayaa jecel taxaddar iyo daryeel. Tan macnaheedu waxa weeye haddii aad wax ka ogaato sida ugu macquulsan macmiilka, way fududaanaysaa inaad la hadasho oo aad tusto dareenkaaga. Sidee loo hirgaliyaa tan ficil ahaan? Taasi waa fududahay! Haddii aad xusuus ku hayso macmiilka, waxaad gacanta ku haysaa dhammaan 'kaararka buunka'! Haddii aad ogaato in macmiilku ka doorbidayo kafee kareemka, waxaad galisaa qoraalada oo marka xigta ee macaamilku yimaado, waxaad isaga / iyada ka dhigaysaa kafee leh kiriim, oo isagu / iyadu way qadarin doonaan daryeelkan oo ay kugu soo jiidan doonaan. Barnaamijka USU-Soft wuxuu leeyahay muuqaal qoraal ah oo noloshaada ka dhigaya mid aad u fudud oo kaa caawinaya inaad gasho dhammaan macluumaadka macmiilkaaga si faahfaahsan oo nidaamsan. Markaad rabto tayo, ka dibna isku day dalabkeena xisaabinta kaas oo si gaar ah loogu talagalay inuu kaa dhigo hay'ad wanaagsan!